Bitootessa 29, 2017
Abbaan alangaa Federaalaa miseensota bulchiisa ol aanaa kan paartii Kongresa Federaalawaa oromoo, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoota 22 irratti himannaa farra shorokeessumaa erga irratti dhiyeessee waggaan tokko darbee jira.
Dhimma isaa kan hordofu manni murtii Lideta dhaddachi afraffaan ragaa namaa fi galmee abbaan alangaa dhiyeesse qoratee murtii kennuuf har’atti ka beellame ta’us murtiin sun hin raawwatamiin hafuu har’a dhaddachicha irratti beeksiseera.
Gama biraatiin immoo manni murtii Lidetaa dhaddachi 19ffaan namoota 16 irratti himannaa farra shorokeessummaa dhiyeessuu dhaan hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 13tti itti muree jira. Namoonni kun martinuu lammiiwwan Oromoo yoo ta’an irra hedduun isaanii illee dargaggoota ta’uun beekamee jira. Namoonni kun yoomii fi eessaa akka qabaman Abukaatoon himatamtootaaobbo Wandimmuu ibsaa nuuf ibsaniiru.
Gabaasa guutuu dhaggeeffadha